China See-Thru / Two-Way Mirror mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
I-Acrylic yeNdlela ezimbini zeZipili, ngamanye amaxesha ezibizwa ngokuba kukujonga, ukubekwa kweliso, okusobala okanye indlela enye. Esi sipili sikhethekileyo sikuvumela ukuba usibone ngelixa usibonisa ukukhanya kwakhona. Ukujongwa, ukusetyenziswa okukhethekileyo, iDhua See-Thru / Two Way Acrylic Mirror lukhetho olufanelekileyo.
• Iyafumaneka kwi-1220 * 915mm / 1220 * 1830mm / 1220x2440mm sheet
• Iyafumaneka nge -039 ″ ukuya kwi-.236 ″ (1.0 - 6.0 mm) ubukhulu
• Iyafumaneka ngombala
• Ubungakanani ngokwezifiso kunye nobukhulu nazo ziyafumaneka
Acrylic Jonga-Nge Mirror, Yabona-THru/ Tyeha-Wewe Mimpazamo Aicrylic SHeet
I-Acrylic yeNdlela ezimbini zeZipili, ngamanye amaxesha ezibizwa ngokuba kukujonga, ukubekwa kweliso, okusobala okanye indlela enye. A zendlela ezimbini zesipili se-acrylic sheet iyilelwe ngefilimu esekwe ekuhleni kwi-acrylic, ivumela inani elincinci lesiganeko ukuba likhanyise kwaye libonakalise okuseleyo. Njengazo zonke ii-acrylics, eli phepha linokunqunyulwa ngokulula, lenziwe kwaye lenziwe.
Igama lemveliso I-Acrylic Jonga-NgeMirror, Jonga-iTru / Iindlela ezimbini zeMirror Iphepha le-Acrylic
Izinto eziphathekayo Intombazana eyi-PMMA
Umphezulu Gqiba Iyabengezela
Umbala Sula okanye umbala
Ubungakanani 1220 * 915mm, 1220 * 1830mm, 1220 * 2440mm, isiko cut-to-ubungakanani
Ukutyeba I-1-6 mm
Ukuxinana 1.2 g / cm3
Ukufihla Ifilimu okanye iphepha lekrafti
Ukusetyenziswa Ukujonga, ukhuseleko, ukuvalelwa kwezilwanyana
MOQ 50 amaphepha
Ngenxa yokuvelisa kunye nokusika ukunyamezelana, ubude bephepha kunye nobubanzi bunokwahluka ngo +/- 1/4 ″. Ukunyamezelana kokutyeba +/- 10% kwii-acrylic sheet kwaye zinokwahluka kulo lonke iphepha. Ngokwesiqhelo sibona iiyantlukwano ezingaphantsi kwe-5%. Nceda ujonge kwizibizo zephepha ezingezantsi.
Nceda unxibelelane nathi ukuba uneemfuneko zokunyamezelana ngokungaphezulu kokunyamezeleka okuqhelekileyo.
Amashiti e-Dhua Acrylic Mirror ayafumaneka ngemibala eyahlukeneyo.
Iindlela ezimbini okanye jonga-izibuko ze-acrylic unezicelo ezahlukeneyo kunye nezibonelelo. Nazi ezinye zeendlela zokubandakanya iindlela ezimbini zesipili kwiphepha le-acrylic kwishishini lakho okanye ekhaya.
I-Dhua Acrylic Mirror Sheet yenziwa ngephepha le-acrylic elingaphandle. Ukwenza isipili kwenziwa ngenkqubo yokunyibilikisa isinyithi kunye nealuminium ekubeni sisinyithi esiphambili esenziwe ngumphunga.
Iindlela ezi-2 zephepha lesipili le-acrylic
I-acrylic 2 indlela yesipili
isibuko se-acrylic ngendlela ezimbini
Ukujonga ngesipili se-acrylic
I-acrylic ezimbini iindlela zesipili
I-acrylic ezimbini zendlela yesipili
indlela ezimbini zesipili
iindlela ezimbini zesipili se-acrylic